सिटिजन्स बैंकले ल्यायो ‘सिटिजन्स सरल बचत खाता’ - samayapost.com
सिटिजन्स बैंकले ल्यायो ‘सिटिजन्स सरल बचत खाता’
समयपोष्ट २०७६ वैशाख २ गते १९:३३
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले नयाँ बचत योजना ‘सिटिजन्स सरल बचत खाता’ सार्वजनिक गरेको छ । सो बैंकले ‘समृद्धिसँग जोडौँ नाता सबै नेपालीको बैंक खाता’ भन्ने नेपाल सरकारको अभियानमा हातेमालो गर्दै नयाँ बर्षबाट लागु हुने गरिे सो खाता सर्वजनिक गरेको हो ।
यस योजनाअन्तर्गत खाता खोल्ने ग्राहक महानुभावहरुलाई बैंकको तर्फबाट रु १००ं खातामा राखिदिने ब्यवस्था गरिएको छ । सुरुमै १०० रुपैयाँ खातामा पाउने ‘सिटिजन्स सरल बचत खाता’ सबै नेपालीहरूको लागि अत्यन्तै फलदायी हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
यस खातामा दैनिक मौज्दातमा वार्षिक ५% ब्याजदर प्रदान गरिनेछ । बैंकले यस योजनाअन्तर्गत सहभागी भएका ग्राहकहरुका लागि विभिन्न प्रकारका सहुलियतहरू उपलब्ध गराएको छ ।
‘योर पार्टनर फोर प्रोग्रेस’ भन्ने नारालाई आत्मसात गरी अनवरत रूपले नेपाली जनताको घरदैलोमा बैंकिंग सेवा पुर्याउँदै आएको यस बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना ८१ वटा शाखा, ७५ वटा ए.टि.एम. र ९९ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट करिब चार लाख ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अनियमितता कै हो त ? यसो भन्छन् अर्थमन्त्री खतिवडा
राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत
इरानले भन्यो हामी अमेरिकासँग कहिल्यै युद्ध चाहदैनौँ
एन आई सी एशियाका ग्राहकहरुलाई सी.पी. हस्पिटलमा उपचार गराउदा २०% सम्म छुट
बालिका बलात्कार गर्नेलाई छ वर्ष कैद
समता अस्पतालमा मृत भेटिएकी तामाङको मिर्गौला निकाल्न हत्या !
महिलालाई यौन सम्पर्कका बेला के गरेको मन पर्दछ ?
दिनमै पटक पटक यौन सम्बन्ध राख्ने युवतीमा आउछ यस्तो परिवर्तन
प्रहरी निरीक्षकद्वारा यौन प्रस्ताव: “संवेदनशिल अंगमा हात लगाएपछि दुई झापड लगाएर चिच्याएँ”
कति पटकको यौनसम्पर्कमा गर्भ रहन्छ ?